Soo dejisan Angry IP Scanner 3.6.2 – Vessoft
WindowsShabakadKormeerka & FalanqayntaAngry IP Scanner
Bogga rasmiga ah: Angry IP Scanner
Kaaliyaha IP-ga ee Kansarka – waa software si uu u baaro dhammaan qalabyada ku xiran shabakada deegaanka. Nidaamku wuxuu isku deyi karaa shabakada martida firfircoon ee cinwaanka IP-ga ee la cayimay ama kala duwanaansho. Faallooyinka Furaha IP-ga ayaa bixiya macluumaad ku filan oo ku saabsan cinwaan kasta oo la xaddiday, oo ah cinwaanka MAC, oo la furay dekadaha, magaca buuxa ee kombuyuutarka iyo kooxdeeda shaqada ee shabakadda. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso ah u hesho FTP, Telnet, SSH ama server-ka internetka ee kombiyuutarka la tarjumay. Kaaliyaha IP-ga wuxuu awood u leeyahay inuu kaydiyo natiijooyinka scan-ka ee TXT, CSV, XML ama faylasha-Port-faylasha. Sidoo kale software wuxuu ballaarin karaa shaqadiisa u gaarka ah iyada oo la isku xirayo saddaxaad ama nafta looxiyo.
Tijaabooyin badan oo dhejis ah
Tijaabinta cinwaanada IP ee kala duwan
Taageerada codsiyada UDP iyo TCP
Eegida dekadaha furan
Ka dhigista natiijada qaabab faylasha kala duwan
Soo dejisan Angry IP Scanner
Faallo ku saabsan Angry IP Scanner
Angry IP Scanner Xirfadaha la xiriira